YS Flora Myanmar
◆人材活躍の創出 Create Opportunities
◆企業の拡大発展 Expand Client Business
◆人材の育成 Cultivate Human Resources
◆日本の多様化 Diversify Japan
+959750 232070
နှုတ်ခွန်းဆက်စကား　Top Messages
ဒီရက်ပိုင်း အားလပ်ရက်လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်း နိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေကို တွေ့မြင်ရတယ်။
အရင်ကတည်းက ကိုယ့်နိုင်ငံကမဟုတ်တဲ့သူတွေနှင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာသဘောကျတဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေ့ရတာ အရမ်းပျော်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား မိတ်ဆွေတွေနှင့် စကားပြောဖြစ်တိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ဂျပန်လူမျိုး ကောင်းမွန်တဲ့အချက်တွေကို သိရှိပြီး ဂျပန်နိုင်ငံကို ပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးမိပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ဂျပန်လူမျိုးနှင့် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့အတွေးတွေ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကနေစပြီး သင်ယူစရာတွေ များလှပြီး အဲဒါတွေက ကျွန်တော့်ကို အမြင်ကျယ်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်က လူတွေ ဒီလောက်အများကြီးရှိနေပါလျက်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကျတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေနှင့်တွေ့ဆုံဆက်ဆံရဖို့ အခွင့်အလမ်းကျ နည်းလွန်းလှပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်လို့ တခုခုလွဲနေသလိုမျိုး ခံစားမိပါတယ်။
JNTOရဲ့၂၀၁၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ စာရင်းအရဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားဦးရေက တစ်လကို လူဦးရေ (၁၅)သိန်းကျော် ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တခြားနိုင်ငံနဲ့ယှဉ်ရင် နောက်ကျနေတယ်ဆိုပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံကို နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ လူတွေက လာရောက်လည်ပတ်ခြင်း ၊နေထိုင်ခြင်းများ ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်လာနေပါပြီ။ အခြားတဖက်မှာလည်း အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ၂၀၁၅ခုနှစ် အောက်တိုဘာလစာရင်းများအရ ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူ နိုင်ငံခြားသားဦးရေက ၇သိန်း ၉သောင်းရှိပြီး ဒီအရေအတွက်ဟာ ယခင်နှစ်တွေနှင့်ယှဉ်ရင် အများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစွမ်းအားကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒီအရေအတွက်ဟာ နည်းနေတုန်းပဲလို့ဆိုရပါမယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာ လုပ်သား မလုံလောက်မှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပြီး အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သူတွေများလာမှုနှင့် ကလေးမွေးနှုန်းကျဆင်းလာမှုတွေက ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အဓိက ပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ နည်းပါးနေသေးပြီး နိုင်ငံခြားသားတွေကို အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးပေးပြီး သူတို့နိုင်ငံကို တဖက်တလမ်းက အကူအညီပေးရာရောက်တယ်ဆိုတဲ့ ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့် ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့် ဂျပန်ဟာဒီအခြေအနေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
"ဂျပန်ကို သဘောကျတယ် ဂျပန်မှာကြိုးစားကြည့်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဂျပန်မှာဘယ်လို အလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ နားမလည်ဘူး။"
ကျွန်တော်တို့ (YS partner.Inc) က နိုင်ငံခြားသားတွေ ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက် ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားသားနှင့် သူတို့အမိနိုင်ငံကို အကူအညီပေးရာရောက်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လုပ်သားရှားပါးမှု ပြဿနာကို တဖက်တလမ်းက ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့(YS partner.Inc)ကုမ္ပဏီနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ကိုယ်စီအောင်မြင်မှုရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်။
I frequently find many people from various countries on my days-off these days. But I feelalittle bit strange since there are onlyafew times to meet people from outside Japan when I do business. We Japan are getting international since the number of foreign visitors to Japan reached to almost 30milionayear in October 2017. On the other hand we have only aorund 2milion of foreign workers in this country which has great economic power. Most companies in Japan are struggling about getting workforce. It is getting more difficult to maintain social welfare structure because of aging society with fewer young people and children. We Flora Amie will dedicate to make many people from outside Japan and their countries wealthier by providing opportunities in Japan, and finally solve the problems in Japan.
Lecture by President & CEO
At the Asian International Healthcare Conference, I gavealecture on the nursing care situation in Japan. With specialized content for medical and long-term care specialists in each country, we were reminded of our role as an advanced long-term care country as Japan's long-term care becomes more globalized.
Healthcare cafe On-site use of wearable devices
2014.1.27 Akihabara UDX
He gavealecture on the synergies between hardware and software at the nursing care site. The hardware section was by Seiko Epson, and the software side was by Maeda, and it was very exciting fromadifferent perspective.
The 10th J Cafe Livealife like me at home
Kawasaki Inn Exchange Center
At the welfare site and manufacturing meeting, he gavealecture on the fusion of home-based services and hardware. There was alsoalively exchange of opinions on how to utilize long-term care in our daily lives.
This is Maeda's blog,our President & CEO.
YS Partner (formerly Flora Ami) is working on and thinking about various things so that as many foreigners as possible can play an active role in Japan. I will tell you some of them.
YS Flora Myanmar Activity
YS Partner သည် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကမြို့ဖြစ်သောရန်ကုန်မြို့မှာ YS Flora Myanmar ကိုယ်ပိုင်စင်တာကို ဖွင့်လှစ်ပေးထားသည်။ ထို့အပြင်ထူးကဲသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များရရှိစေရန်အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား နှင့်ပတ်သက်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းတစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီပေးအုံးမှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဂျပန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ဂျပန်ဘာသာစကားအခြေခံအဆင့်မှကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖြစ်တဲ့အထိ သင်ကြားပေးပါမည်။အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကျောင်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဂျပန်လူမျိုးနှင့်တိုက်ရိုက်ပုံမှန်စကားပြောဆိုမှုအထောက်အပံ့ပေးခြင်းတို့ ရှိပါသည်။ကုမ္ပဏီသို့ဝင်ပြီးနောက် ဂျပန်ဘာသာစကားသင်တန်းလည်း ရှိသည်။ထို့ကြောင့်သင်သည်ရေရှည်အတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရှိစေနိုင်တာမို့လက်တွဲနိုင်ပါသည်။
YS Flora Myanmarသည်ဂျပန်ကုမ္ပဏီများနှင့် မိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းလည်းသင်ကြားပို့ချပေးပါသည်။ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များနှင့်ပြည်ပရှိအသက်မွေး၀မ်းကျောင်း ကျောင်းများမှကျောင်းသားများအတွက်လည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
YS Flora Myanmar Service
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများကို ငှားရမ်းလိုသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ဂျပန်တွင်နေထိုင်သော နိုင်ငံခြားသားများကိုအလုပ်ခန့်ရန် (သို့မဟုတ်) ဂျပန်တွင် အလုပ်ပြောင်းလိုသော ကုမ္ပဏီများကို ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကိုက်ညီခြင်း၊ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းမှုဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံခြင်း၊ အထိမ်းအမှတ်များ ကျင်းပခြင်းနှင့် အေဂျင်စီမှတဆင့် အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း စသည့် အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပေးနေပါသည်။
YS Flora Myanmarသည်အွန်လိုင်းဂျပန်စာသင်တန်းကိုပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင်၏မိခင်ဘာသာစကားနှင့်ဂျပန်နှစ်ဘာသာလုံးဖြင့်ဂျပန်စာကိုလေ့လာခြင်းဖြင့်သင်၏နားလည်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးဂျပန်လူမျိုးနှင့်အမှန်တကယ်စကားပြောရန်အခွင့်အလမ်းများကို တိုးပွားစေနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စနစ်၏ ယန္တရားကို ရှင်းပြပြီး ပြည်ပလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စနစ်တစ်ခုစီ ပြောင်းလဲနေသည့် သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်နှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော အကောင်းဆုံး နိုင်ငံခြားအရင်းအမြစ် မူဝါဒကို ပေးပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်လျှောက်ထားသူနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်လိုသူများအတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များစွာ ရှိပါသည်။
ဤသည် ဗီဇာအထောက်အပံ့အပါအဝင်အလားအလာရှိသော ၀န်ထမ်းများအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာသည့်လျှောက်ထားသူများကို ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဆောင်လာမှာ ဖြစ်ပြီး လေဆိပ်မှ တဆင့် ၎င်းတို့ကို သင်၏ကုမ္ပဏီသို့ ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။
၎င်းသည် ၀န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ပူးပေါင်းပြီးနောက် သင့်ဘဝကို ချောမွေ့စွာနေထိုင်နိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးရန်အထောက်အကူပြုပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဘဝနှင့်အကျွမ်းတ၀င်မရှိသောသူများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိုဘိုင်းဖုန်းနှင့် ဘဏ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စျေးဝယ်ခြင်းနှင့် နေထိုင်ရန် နေရာရှာခြင်းစသည့်ဘဝနှင့် သက်ဆိုင်သော အမျိုးမျိုးသောအရာများကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဂျပန်သို့မ၀င်ခင်၊ သင့်အား ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ဘဝတွင် အခြေခံကျသောအဓိပ္ပာယ်ရှိသော သင်ခန်းစာကို ဥပမာ - အများပြည်သူ နေရာများတွင် အမှိုက်သရိုက်များနှင့်အမူအကျင့်များ မည်သို့ပြုကျင့်နေထိုင်ရမည်ကိုသင်ပေးပါလိမ့်မည်။
ဂျပန်သို့ လာရောက်ပြီးနောက် နိုင်ငံခြားသားများအား လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ဘဝအထောက်အပံ့နှင့်ဘာသာစကား သင်တန်းများအတွက် ထောက်ပံ့ ပေးပါသည်။
စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှု၀န်ကြီးဌာန၏ အချက်အလက်များအရ ၂၀၃၀ ခုနစ်တွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အင်ဂျင်နီယာ ဝန်ထမ်း ၅၉၀,၀၀၀ ဉီးရေ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဂျပန်လူမျိုး အင်ဂျင်နီယာများ၏ အိုမင်းမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ တိုးတက်လာလိမ့်ပါမည်။ YS Partner Company ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ နိုင်ငံခြားအင်ဂျင်နီယာများနှင့် လက်တွဲ၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အိုင်တီယှဉ်ပြိုင်မှုကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဂျပန်တွင် တက်ကြွစွာ ပါ၀င်သောအင်ဂျင်နီယာများကို တိုးမြှင့်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာသာစကားအဆင့်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး သင်၏ ကုမ္ပဏီလိုအပ်ချက်နှင့်အညီ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ ကမ်းလွန်နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် ကွန်ယက်ကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိုင်တီ၊ ကွန်ယက်၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အီလက်ထရောနစ်နှင့် စက်ပြင်ကဲ့သို့အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းအမျိုးမျိုးကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဂျပန်လူမျိုး၏ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းနှင့်အညီ ကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သားများအတွက် သင်တန်းစနစ်ကဲ့သို့သော လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးစနစ်သည် အနာဂတ်တွင် အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။ သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်‌ရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် နေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းအသစ်ကို ဖန်တီးထားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်‌ရန်အတွက် ၀န်ထမ်းအဖြစ် နိုင်ငံခြားသူနာပြု ၀န်ထမ်းများကို အလုပ်လုပ်နိုင်ရန် စနစ်တစ်ခု ချမှတ်ထားသည်။ ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းသားများအတွက် သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်‌မှုနှင့် အစားအစာများကို ပြင်ဆင်ထားသည့် အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုးကို ထည့်သွင်းထားပါသည်။ YS Partner Company အနေဖြင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အသုံးပြုသည့် နည်းစနစ်များ၊ လုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ၊ စက်ရုံများနှင့် သက်ဆိုင်ရာတွင် ဗဟုသုတအတွေ့အကြုံများရှိသော ဝန်ထမ်းများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုလုပ်ထားပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများကို အလုပ်ခန့်အပ်ခြင်း၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ရယူခြင်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း
တစ်ဦးချင်း လိုအပ်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံခြား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့် (ဂျပန်နိုင်ငံအပါအ၀င်) ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ရယူခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသား ဝန်ထမ်းများကို ငှားရမ်းခြင်းအတွက် စနစ်များအပေါ် အခြေခံ၍ အကောင်းဆုံးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နည်းဗျူဟာကို တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဗီဇာနှင့်ပညာရေးကိစ္စများအတွက် အကြံဥာဏ်များပေးပါသည်။ ပြည်ပရှိ လူသားအရင်းအမြစ်နှင့် နိုင်ငံရပ်ခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အကြံပေးခြင်းနှင့် ထောက်ပံ့ခြင်းအပြင် စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းနိုင်််ပါသည်၊ (ဥပမာ - ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် အပန်းဖြေစခန်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအစိုးရက ဦး ဆောင်နေသည်။) သင်ဤစီမံကိန်းတွင် သင်ပါ၀င်ရန် (သို့မဟုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
YS Partner Events
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော နိုင်ငံတကာမှ ကျောင်းသားများနှင့် အဖွဲ့လိုက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ပုံမှန်အလုပ်ပြပွဲများနှင့်မတူသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦး ချင်းတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးပြီး အလုပ်နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိအောင်လည်း ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် နိုင်ငံခြားသားများနှင့် လုပ်ငန်းစနစ်များကို အလုပ်ခန့်ထားမှုရှင်းလင်းချက်၊ ထိရောက်သော ၀န်ဆောင်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးရန် ကုမ္ပဏီမိတ်ဖက်များနှင့် ပြင်ပကျွမ်းကျင်သူများကို ဖိတ်ကြားပြီး နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များမှကျောင်းသားများ၊ ဘွဲ့ရများနှင့် အုပ်စုလိုက်တွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအတွက် သီးသန့်စီစဉ်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
Japan Must Be Diverse
Many Opportunities In Japan For Every Person From Every country
ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ
Japan has excellent technology, culture and economy. I would like foreigners to experience, learn, and advance their careers in Japan by working in Japan.
ဂျပန်တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော နည်းပညာများ၊ ယဉ်ကျေးမှုမျာ'နှင့် စီးပွားရေးများရှိသည်။ နိုင်ငံခြားသားများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်၊ လေ့လာမှုများကို တိုးတက်စေချင်ပါတယ်။
Getting Be More Serious Shortage Of Workforce In Japan
ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသား လုပ်သားနည်းပါးမှုသည် ပိုမိုများပြားလာလိမ့်မည်
Japan's working-age population continues to decline. The working population of Japan will decrease by 25% from 59.6 million in 2010 to 44.8 million in 2040! There isashocking fact.
ဂျပန်နိုင်ငံ၏လူဦးရေမှာ ဆက်လက်ကျဆင်းနေပါသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်သောလူဦးရေသည် ၂ဝ၁ဝပြည့်နှစ်တွင် ၅၉.၆ သန်းမှ ၂၀၄၀ခုနစ် တွင် ၄၄.၈ သန်းသို့ ၂၅% ကျဆင်းနိုင်လိမ့်မည်။ ဒါသည် ထိတ်လန့်စရာ အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံခြားသားများသည် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အပေါ် မှာ အခြေခံ၍ သက်ဆိုင်ရာ နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်း ရှိသည်။ ဤနေထိုင်မှု အဆင့်အတန်းနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီး သင့်ကို အလုပ်ခန့်ရန် သဘောတူရမည်။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက် အဓိက အလုပ်အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးစနစ် - ဂျပန်တွင်နည်းပညာသင်ယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ၃နှစ် မှ ၅ နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
အချိန်ပိုင်းအလုပ် - နိုင်ငံခြားသား ကျောင်းသားများသည် တစ်ပတ်လျှင် (၂၈) နာရီအထိအချိန်ပြည့် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိပြီး ၎င်းတို့သည် အရည်အချင်းမပြည့်မီသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မည့်သည့်စီးပွားရေး (သို့မဟုတ်) မည့်သည့့်အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားကို မဖော်ပြထားပါ။
(အကောက်ခွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမပါ) အချိန်ပြည့် ၀န်ထမ်း - လူပုဂ္ဂိုလ်ကို နည်းပညာ၊ လူသားအသိပညာနှင့် နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရှိခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုပြီးနှင့် အလုပ်ရှင်တွင်သက်ဆိုင်သော စီးပွားရေးရှိမှသာ နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးမည်။ ဘွဲ့ရအသစ်များသည် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် နေထိုင်ရန် နေထိုင်သည့်အဆင့်မှ နည်းပညာ၊ လူသားဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာအတွက်နေထိုင်ရာအဆင့်သို့ ပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။
YS Partner ၏အားသာချက်
YS Partner (ယခင်က Flora Ami) သည် နိုင်ငံရပ်ခြား လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ရရှိအောင် လျင်မြန်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ အဓိက လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ရှာဖွေပေးသောကုမ္ပဏီများဟုခေါ်ဆိုနိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများကိုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။ (ဥပမာ - မလုပ်နိုင်သောဒေသတွင်း လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်သွယ်မှုများ၊ တစ်ဦးချင်းစီအတွက် တစ်ဦးချင်းပံ့ပိုးမှုနှင့် စီးပွားရေးမဟာမိတ်များ။)
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားမှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုအရ မြင့်မားသော ဗီယက်နမ်ကိုအာရုံစိုက်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်သည့် အရည်အချင်းပြည့်ဝသော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ တိုးပွားလာစေရန် ပြည်ပရောက် ဂျပန်နိုင်ငံသားတို့၏ ဆွဲဆောင်လှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်၌ နေထိုင်နေသူများ (သို့မဟုတ်) တစ်ချိန်ကပင် ဂျပန်၌နေထိုင်ဖူးသူများနှင့်အတူ အသိုင်းအ၀ိိုင်း တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျပန်နှင့် ဂျပန်တွင် အတွေ့အကြုံရှိသော ဘွဲ့ရလူငယ်လူရွယ်လေးများနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့် အဆက်အသွယ်တိုးပွားလာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ထံမှ ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းကို လုပ်ဆောင်သည်၊ ဘွဲ့ရအသစ်များကို ငှားရမ်းပြီး စနစ်တကျငှားရမ်းသည်။ သူတို့၏ စီမံကိန်းနှင့် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုများကို အလွန်အမင်း အကဲဖြတ်ရသည်။ ထို့အပြင် နိုင်ငံခြားသားများကို အလုပ်ခန့်ထားရန်အတွက် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးအမျိုးအစား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးသောစနစ်များကို နားလည်ပြီး အသုံးချရန်နှင့် ပစ်မှတ်ထားသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်သည်။ YS Partner (ယခင်က Flora Ami) သည် စနစ်အားလုံး၏ နားလည်မှုနှင့် ဗဟုသုတများစွာရှိပြီး သင်၏ ကုမ္ပဏီအတွက် အသင့်တော်ဆုံးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် သင့်တော်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများမှ ဗီဇာနှင့်ထောက်ခံမှု အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ လိုအပ်သောဂျပန်အဆင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် နောက်ဆက်တွဲစနစ်၊ စနစ်အမျိုးမျိုးကိုရှင်းပြခြင်း၊ အသစ်သောကုမ္ပဏီများသည် နိုင်ငံခြားသားများကို ငှားရမ်းခြင်းများမှရရှိလာသော အခြေအနေများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ သင်ကုမ္ပဏီရဲ့ လိုအပ်ချက်ပြဿနာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် စိန်ခေါ်မှုရှိသောကုမ္ပဏီများနှင့် အလုပ်သမားအင်အားလိုအပ်နေသော ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့တင်ပြပါလိမ့်မည်။
YS Partner (ယခင် Flora Ami) မှထောက်ပံ့ပေးသည့်နိုင်ငံခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အကြောင်း
မကြာသေးမီကဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်အပြိုင်အဆိုင်များပြားလာခြင်းနှင့်အတူကုမ္ပဏီများ၏ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသည်အရေးကြီးသောပြissueနာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဂျပန် ၀ န်ထမ်းများသာသို့မဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်ဆက်ဆံခြင်းမှသာယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်ခက်ခဲလာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများတွင်ဂျပန်သည်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ်မြင်ပြီးဂျပန်တွင်အလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံခြားသားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်အလွန်ကောင်းမွန်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များသည်ဂျပန်၏ထူးခြားသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမျိုးရေးကိုအလွန်စိတ် ၀ င်စားသည်။ ဂျပန်၏သူတို့၏သိပ္ပံဆိုင်ရာသိချင်စိတ်နှင့်မျှော်မှန်းချက်များသည်ဂျပန်လူမျိုးများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ကြီးထွားမှုကိုများစွာထိခိုက်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ YS မိတ်ဖက် (ယခင် Flora Ami) သည်ရေရှည်ရှုထောင့် မှနေ၍ ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကောင်းသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီများအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးတွေ့ဆုံမှုများကိုဖန်တီးပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်အဲဒီလိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေရှိပါသလား။ သူတို့ကသူတို့စုဆောင်းထားရင်တောင်မှ applications တွေကိုမရရှိနိုင်ဘူးလား။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်သမားလုပ်သား ဦး ရေလျော့ကျလာပြီးအလုပ်ကြမ်းလုပ်လိုသောလူငယ်များသည်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်လျော့ကျလာနေသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, အလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့အလွန်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အလုပ်ရွေးချယ်ကြဘူးသောနိုင်ငံခြားသားအများအပြားရှိပါတယ်။ ဥပမာဂျပန်ဘာသာစကားသင်ယူရန်လူသစ်များသည်အလုပ်ရွေးချယ်ခြင်းထက်အလုပ်တွင် ပို၍ ပျော်ရွှင်မှုရှိကြသည်။ အလုပ်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ ကုမ္ပဏီနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်အကြားကိုက်ညီသည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်အနာဂတ်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ YS လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (ယခင် Flora Ami) တွင်ထူးခြားသောကွန်ယက်တစ်ခုရှိပြီးအလုပ်များရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်သောလူငယ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သည်။
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပေါ်လစီ နဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိသည့် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေထိုင်သည့်နိုင်ငံခြားသားများရဲ့ ရိုးရှင်းသောလုပ်အားကို အခြေခံအားဖြင့် တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားပါသည်။ သို့သော် ကြီးမားသော အလုပ်သမားပြတ်လပ်မှုကို ဖြေရှင်းရန် ၂၀၁၉ ဧပြီလ မှ စတင်ကာနိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများကိုတိကျသောအထူးကျွမ်းကျင်မှုလုပ်သား နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းဖြစ်ဖို့အတွက် စက်မှုလုပ်ငန်း (၁၄)ခုတည်ထောင်ပေးထားသည်။ ဒါပေမယ့် "ဗဟုသုတ(သို့မဟုတ်)အတွေ့အကြုံများစွာ လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။"
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး / အဏ္ဏဝါစက်မှုလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း၊ လေကြောင်းလုပ်ငန်း၊ နေရာထိုင်ခင်းလုပ်ငန်း၊ သူနာပြုစောင့်ရှောက်ရေး၊ အဆောက်အအုံသန့်ရှင်းရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးမွေးမြူရေး၊ ဆက်စပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများ
မှတ်ပုံတင်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ခံသောကုမ္ပဏီများကိုလည်း ထောက်ခံသည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် နိုင်ငံခြားသားများကို ငှားရမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအားလုံးကို လိုက်နာပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်းမှတ်ပုံတင်နံပါတ် - 19/No. 000026
Nyan Min Htet
No.(275/C), 1st Floor, Pyay Road, Myay Ni Gone (Near Fire Services Research and Fire Safety Education Center) Yangon, Myanmar
kannai Building 4th Floor,Chojamachi 4-9-1, Naka-ku Yokohama-shi, 231-0033 ,Japan
YS Partner ၏ မိတ်ဖက်များသည် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့တွင် ကောင်းမွန်သော လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ချိတ်ဆက်လေ့ကျင့်ပေးပြီးအင်ဂျင်နီယာများနှင့် ကျွမ်းကျင်သောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်ကို ပိုမိုစိတ်၀င်စားလာပြီး ဂျပန်စာစွမ်းရည်အဆင့်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ ကျောင်းများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ကောလိပ်များကို လက်ခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို ဂရုတစိုက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဂျပန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံခြားသားများ၏ အောင်မြင်မှုကို ရေရှည်တွင်အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။ YS Partners သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားကျောင်းသားများ၏ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်မှုမှာလည်း လူဦးရေ ၂၀၀၀ အမြဲတမ်းရှိသည်။ ဒီစွမ်းအားကို အသုံးချပြီးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုလျင်မြန်စွာနဲ့ အရေအတွက်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိစေရေးကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ကောလိပ်များကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခြင်းဖြင့် သူတို့သည် ရေရှည်တွင် ဂျပန်၌ တက်ကြွစွာပါ၀င်နိုင်သည်။ YS Partner ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည် အနာဂတ်ကာလတွင် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများကို နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများနှင့် ဂျပန်ကုမ္ပဏီများ၏ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးတက်လာခြင်းအတွက် မြင့်မားသောတန်ဖိုးကို ဆက်လက်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံခြားသာများကို သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် လက်ခံမှုသည် စတင်တော့မည်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ YS Partner ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် (ယခင် Flora Ami) ၏ ကိုယ်စားလှယ်သည် သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပါ၀င်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံခြားသားများကို သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်သူများအဖြစ် လက်ခံရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ အဓိကစနစ်သုံးခုကို စတင်ခြင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းသားများနှင့် စောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများအတွက် နေထိုင်ခွင့်အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ သီးခြားကျွမ်းကျင်မှုများတည်ထောင်ခြင်းတို့ဖြင့်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း၏ အတွင်းပိုင်းကို သိသော YS Partner ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦး ကသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ စက်ရုံတစ်ခုစီ၏ လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုအတွက် နိုင်ငံခြားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စနစ်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် သမိုင်းတိုတောင်းသောကြောင့် စမ်းသပ်မှုများနှင့်အမှားများမှ ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဘာသာစကားနှင့် အရည်အချင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသည်ထပ်တူကျသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများကို လိုအပ်သည်။ YS Flora Myanmarသည် ဤအမြင်များကိုယူပြီး မဟာဗျူဟာနှင့်ကောင်းမွန်စွာ ညှိထားသောဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။
Inquiry Estimilation Recieving our guide
Karlle Stone Capital Company
We YSpartner, Inc is collaborating with Karllestone to provide more valuable service with clients.
YSパートナーは、ビジネスモデルやイノベーションのコンサルティング会社Karlle Stone Capital Company とパートナーシップを結んでいます。
<ယခင်အကြောင်းအရာများ> လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အသုံးချမှု နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံခြားသားများကို အလုပ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
မတ်လ (၁၆)ရက်, ၂၀၁၆ခုနစ် တွင်ကျင်းပခဲ့သည်
နိုင်ငံခြားသားများ၏ အလုပ်ခန့်ထားမှု၏ ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည် နိုင်ငံခြားကျောင်းသားများ၏ လက်တွေ့အခြေအနေများနှင့်နိုင်ငံခြားကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းသားများ၊ တိကျသောချဉ်းကပ်မှုများစသည့် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ စဉ်းစားရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ နေရာသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပြည့်နေပြီး လူတိုင်း၏ စိတ်အားထက်သန်မှုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားသားများအနေဖြင့် တက်ကြွသောအခန်းကဏ္ဏများမှ ပါ၀င်နိုင်ခြင်းနှင့်အတူတကွ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းနှင့်အတူ ဂျပန်နှင့်ကုမ္ပဏီများအကြား ကွဲပြားခြားနားခြင်းအားဖြင့် ဂျပန်၏ စစ်မှန်သောယှဉ်ပြိုင်မှုကျဆင်းသွားနိုင်သည့် နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်မှု အခြေအနေနှင့် ဂျပန်ရှိ နိုင်ငံခြားသားများ၏ အသံများကို ကြေငြာရန် သူတို့ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဂျပန်တွင် အလုပ်လုပ်ရန် ဆန္ဒပြင်းပြသောနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများ၏ အသံများက ထိုနေရာနှင့် ကိုက်ညီသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် မှတ်သားရမည့်အချက်များအပါအ၀င် မည်သည့်အလုပ်အမျိုးအစားနှင့် စနစ်ကိုအသုံးပြုသင့်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ လူမှုစုရုံးမှုတွင် ရာထူးအမျိုးမျိုးမှ လူများသည် စိတ်အားထက်သန်စွာ ပြောဆိုရန် နေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ရုံးချိန် - နံနက် ၉နာရီမှ ၅နာရီအထိ
ရုံးဖွင့်ရက် - တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့အထိ
+95 09 750 232 070
Copyright 2020 YS Flora Myanmar, Inc